မ ယုံနိုင်လောက်အောင် နုပျိုနေ တဲ့ အ သက် ၇၀ အဖွား ရဲ့ လျှို့ဝှက် ချက် – Shwewiki.com
မ ယုံနိုင်လောက်အောင် နုပျိုနေ တဲ့ အ သက် ၇၀ အဖွား ရဲ့ လျှို့ဝှက် ချက်
အွန် လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအလား နုပျိုလှပပြီး အမိုက်စားဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်း လူပြောများနေပါတယ်… သူကတော့ သြစတေးလျအနောက်ဘက်ပိုင်း ပါ့သ်မြို့က ကယ်ရိုလင်းဟာ့ဇ်လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၇၀ အရွယ် အဘွားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်…သူကတော့ ကလေးသုံးယောက်မိခင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် နုပျိုပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ကယ်ရိုလင်းက လိျှု့ဝှက်ချက်အချို့ကို ပရိသတ်တွေဆီ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်….သူမအတွက် ခုလို အသက် ၇၀ အထိလှပအောင်လုပ်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…အဲတာတွေကတော့
1. သကြားနဲ့ ဂျုံလုံးဝမစားဘဲ အချိုရှောင်တာ
2. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစားကို ချင့်ချိန်ပြီး စားတာ
3. အစာစားတဲ့အခါမှာ ပမာဏမများစေအောင် သတိနဲ့ စားတာ
ကယ်ရိုလင်းက အိပ်ရေးဝဖို့လည်း လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး(၈)နာရီ အိပ်သင့်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်…
ကယ်ရိုလင်းဟာ မနက်စာကို အသီးတစ်မျိုး၊ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သာ စားလေ့ရှိပါတယ်… အဲဒီနောက် ကြက်ဥပြုတ် ၂ လုံး သို့မဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီးတွေ ဟင်းနုနယ်ရွက်တွေနဲ့ ရောပြီး မွှေကြော်ထားတဲ့ ကြက်ဥကြော်ကို စားလေ့ရှိပါတယ်…..
ဒါတွေမစားဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကယ်ရိုလင်းက အသီးတွေကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောပြီး သောက်သုံးပါတယ်…
နေ့လယ်စာကိုတော့ ကြက်သား၊ ထောပတ်သီး၊ ချိစ်တွေကို ဆန်မုန့် ဘီစကစ် မဟုတ်ရင် ပေါင်မုန့်နဲ့စားလေ့ရှိပါတယ်…. တစ်ခါတစ်လေ ဆာလ်မွန်ငါးသုတ်လို အရွက်စုံသုတ်တွေကိုလည်း စားပါတယ်….
ညစာကိုတော့ ကြက်သားနဲ့ ငါးပဲစားသုံးတာများပါတယ်….ပြီးတော့ အရွက်သုတ်၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ကန်စွန်းဥတွေကို စားတတ်ပါတယ်… အဆာပြေစားချင်ရင်တော့ ကယ်ရိုလင်းက လက်ဖက်ရည်၊ အစေ့အဆံတွေနဲ့ ဆန်ဘီစကစ်တွေကို စားလေ့ရှိပါတယ်… နှစ်ပေါင်း(၃၀)လုံးလုံး ကယ်ရိုလင်းအတွက် အချိုကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ခဲ့ပါတယ်….
အဲဒါကြောင့် သူမက သကြားလုံးဝမပါတဲ့ မုန့်အချိုတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်စားတတ်ပါတယ်… ပရိုတိန်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးအချိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးတာကြောင့် နေ့တိုင်းစားတဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ပရိုတိန်းဓာတ်ပြည့်ပြည့်၀၀ရဖို့ သူမက အမြဲဦးစားပေးပါတယ်….
ညနေဘက်တွေမှာ တော့ ကယ်ရိုလင်းက အနက်ရောင်ချောကလက် (၂)ခုလောက်ကို စားဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
ဒါ့အပြင် ကယ်ရိုလင်းဟာ နေ့စဉ် တရားထိုင်တတ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဒါတွေကတော့ သူမ အသက် ၇၀ ထိ နုပျိုနေရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲ…. ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သူ့လို လှပနုပျိုအောင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်…